တရုတ်နိုင်ငံက အမေရိကန်နိုင်ငံအား အရှေ့တောင်အာရှ၌ မပေါက်ကွဲသေးသည့်ဗုံးများ ထားခဲ့သည့်အတွက် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန် - Xinhua News Agency
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့ Chaktomuk မြစ်ထဲမှ တွေ့ရှိခဲ့ရသည့် စစ်ကျန်ဗုံးတစ်လုံးအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေ ၅ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(CMAC/Handout via Xinhua)
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကျောက်လိကျန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံအား အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင် မပေါက်ကွဲသေးသည့်ဗုံးများ တန်ချိန် ထောင်ပေါင်းများစွာ ထားခဲ့သည့်အတွက် မေ ၁၁ ရက်တွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအတွင်းမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံက ဗုံးတွေ ၊ ဇီဝဓာတုလက်နက်တွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သုံးခဲ့ပြီးတော့ ဗီယက်နမ် ၊ လာအို နဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားမီဒီယာများ၏ ဖော်ပြမှုများအရ မြို့တော်ဖနွမ်းပင်မြို့ တော်ဝင်နန်းတော်၏ မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာ၌ မကြာသေးမီက ပေါက်ကွဲတတ်သော ပစ္စည်း ၅၀၀ ကီလိုဂရမ်ကျော် ပါဝင်သည့် အလေးချိန် တစ်တန်ရှိသော အမေရိကန်လုပ် ဗုံးတစ်လုံးကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဧပြီလတစ်လတည်းတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၌ မပေါက်ကွဲသေးသည့် အမေရိကန်လေကြောင်းဗုံး ၅ လုံးထက်မနည်းအား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဗုံးတစ်လုံးစီမှာ အလေးချိန် ၂၀၀ ကီလိုဂရမ်ကျော် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်သော မေးခွန်းအား ပြန်လည်ဖြေကြားရာတွင် ကျောက်လိကျန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၌ ဗုံးများ ၊ မြေမြှုပ်မိုင်းများ နှင့် အမြောက်ဆန်များ တန်ချိန် ၁၅ သန်းကျော် ပစ်ချခဲ့ပြီး ယင်းတို့အနက် တန်ချိန် ၈၀,၀၀၀ ခန့်သည် မပေါက်ကွဲသေးဘဲ နိုင်ငံနယ်မြေပိုက်နက်၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ပြန့်ကျဲနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ၊ ယင်းမှာ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲ ပြီးဆုံးချိန်မှစတင်ကာ လူပေါင်း ၄၀,၀၀၀ ကျော် သေဆုံးစေခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၆၀,၀၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“လာအိုနိုင်ငံမှာ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက စုစုပေါင်း အလေးချိန် တန်ချိန် ၂ သန်းရှိတဲ့ ဗုံးပေါင်း ၂၇၀ သန်း ကြဲချခဲ့ပါတယ်။ဆိုလိုတာက နိုင်ငံတွင်းက လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် တစ်တန် ဒါမှမဟုတ် ဗုံး ၁၃၅ လုံး ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
Yale တက္ကသိုလ်မှ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မဟုတ်သေးသော အချက်အလက်များအရ ၁၉၆၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ၁၉၇၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအထိ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၌ စစ်လက်နက်ပစ္စည်း တန်ချိန် ၂ ဒသမ ၇ သန်း ကြဲချခဲ့ကြောင်း ကျောက်လိကျန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရအဖွဲ့မှ စာရင်းဇယားများတွင် ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ မြေမြှုပ်မိုင်းအပါအဝင် မပေါက်ကွဲသေးသည့် စက်လက်နက်ပစ္စည်းကြောင့် လူပေါင်း ၂၀,၀၀၀ နီးပါး သေဆုံးခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၄၅,၀၀၀ ကျော် ကိုယ်အင်္ဂါချို့ယွင်းခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
“အမေရိကန်နိုင်ငံက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ အမိန့်ညွှန်ကြားချက် ဖျက်ဆီးသူ ၊ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ပဋိပက္ခ ဖန်တီးသူ ၊ နိုင်ထက်စီးနင်းပြုတဲ့သံခန်းတမန်ခင်း ပြုလုပ်သူ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သမိုင်းက သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။”ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကျောက်လိကျန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းမှာ ဒီမိုကရေစီ ၊ လူအခွင့်အရေး နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အမည်များဖြင့် အုပ်စုဂိုဏ်းငယ်တွေ ဖွဲ့စည်း ၊ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေ သွေးထိုးလှုံဆော်နေစဉ်အတွင်းမှာ အခြားသူများအပေါ် “အကျပ်ကိုင်မှု” နှင့် “စစ်ပုံသွင်းခြင်း” ဆိုသည့် တံဆိပ်များကပ်ရန် အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက် တကယ့်ကို အမေရိကန်စတိုင် လိုသူအပေါ် တစ်မျိုး၊ မလိုသူအပေါ် တစ်မျိုးထားသည့် စံနှုန်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“အမေရိကန်နိုင်ငံကာကွယ်တာက နိုင်ငံငယ်တွေ ၊ အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် အသုံးချတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဩဇာလွှမ်းဗိုလ်ကျတာနဲ့ ဂိုဏ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ကျောက်လိကျန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဝရုန်းသုန်းကားအခြေအနေ ၊ ကွဲပြားမှု နှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုအစား ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှု နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ရှာဖွေကြိုးပမ်းရန် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ ဘုံရည်မှန်းချက် နှင့် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်း၏ တူညီသောမျှော်လင့်ချက် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
အစုအဖွဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေး ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကြံစည်အားထုတ်မှုများ နှင့် ဆူပူမှု ၊ တင်းမာမှုများ ဖန်တီးခြင်းသည် ထောက်ပံ့မှု ရရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုကာ ကျောက်လိကျန်းက အာရှနိုင်ငံများအနေဖြင့် အဓိက ပါဝါပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက် စစ်တုရင် နယ်ရုပ်တစ်ရုပ် သို့မဟုတ် အဓိကပါဝါပြိုင်ဘက် အနေဖြင့် ဒေသအား စစ်တုရင်ခုံတစ်ခုံအဖြစ် အသုံးပြုရန် မည်သည့်အခါမှ ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, May 11 (Xinhua) — Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian on Wednesday slammed the United States for leaving tens of thousands of tonnes of unexploded bombs in Southeast Asian countries.
“During the Vietnam War, the United States used cluster bombs and bio-chemical weapons and committed heinous crimes in Southeast Asian countries including Vietnam, Laos and Cambodia,” Zhao toldaregular press briefing.
In response toaquestion on the topic, Zhao said that the United States released more than 15 million tonnes of bombs, landmines and shells in Vietnam, of which about 80,000 tonnes are unexploded and remain scattered over nearly 20 percent of the country’s territory, which has killed more than 40,000 people and wounded more than 60,000 since the end of the Vietnam War.
“In Laos, the U.S. troops dropped 270 million bombs, weighing2million tonnes in total, meaning one tonne or 135 bombs for each person in the country,” Zhao said.
He said it isatypical U.S.-style double standard for the United States to pin the labels of “coercion” and “militarization” on others while forming small cliques and instigating confrontation in the name of democracy, human rights and rules.
“What the United States defends is its own hegemony and the ‘rules of the gang’ at the expense of the fundamental interests of small and medium-sized countries,” the spokesperson said.
Noting that attempts to provoke bloc confrontation and create turbulence and tension will gain no support, Zhao said Asian countries will never allow the region to be used asachessboard for major power rivalry orachess piece for major power confrontation. ■
Photo – Photo taken on May 5, 2022 showsawar-left aerial bomb recovered from the Chaktomuk River in Phnom Penh, capital of Cambodia. (CMAC/Handout via Xinhua)